तपाइकाे शरिरमा अक्सिजनकाे कमि हुनबाट जोगिन यस्ताे सजिलाे उपाय अपनाउनु हाेस् ! जानकारी सेयर गर्नुहोला – List Khabar
Home / समाचार / तपाइकाे शरिरमा अक्सिजनकाे कमि हुनबाट जोगिन यस्ताे सजिलाे उपाय अपनाउनु हाेस् ! जानकारी सेयर गर्नुहोला
तपाइकाे शरिरमा अक्सिजनकाे कमि हुनबाट जोगिन यस्ताे सजिलाे उपाय अपनाउनु हाेस् ! जानकारी सेयर गर्नुहोला
तपाइकाे शरिरमा अक्सिजनकाे कमि हुनबाट जोगिन यस्ताे सजिलाे उपाय अपनाउनु हाेस् ! जानकारी सेयर गर्नुहोला । को-रोना महामारीको दोस्रो लहरले धेरै मानिस संक्रमित भएका छन् । को-रोना संक्रमितहरूलाई अक्सिजनको समस्या हुन थालेको छ । अक्सिजनको कमी धेरैको ज्या-नै गएको छ ।
अक्सिजन कम भएका व्यक्तिलाई स्वास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ भने ज्यानै जाने समेत खतरा हुन्छ । शरीरमा अक्सिजनको कमी भएमा आफ्नो घरमा पनि ग्यास, स्टोभ, मैनबत्ती, विजुली वा ग्यास हिटर जस्ता वस्तुहरूबाट कम्तिमा पनि ५ फिट टाढा रहनुहोस् । यी चीजहरूको नजिक जाँदा थप अक्सिजनको अभाव हुन जान्छ । पेन्ट थिनल, एरयोसोल स्प्रे, क्लिनिङ्ग फ्लूडजस्ता फ्लेमेबल प्रोडक्ट्सहरूको प्रयोग नगर्नुहोस् ।
यसका साथै पेट्रोलियम, आयल, ग्रीस बेस्ड क्रिम जस्ता वस्तुहरू छाति वा शरीरको कुनै पनि भागमा नलगाउनुहोस् । तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने यसलाई कम गर्नुहोस् । धुम्रपान गर्ने मानिसहरूबाट टाढै रहनुहोस् । यती मात्र हैन, घरमा पूजाका लागि प्रयोग हुने अगरबत्ती वा धूपबत्तीको धुवाँबाट पनि टाढै रहनुहोस् । यस्तै घरमा इन्डोर प्लान्ट लगाउनुहोस् । यसबाट सधै अक्सिजन पाइन्छ । जानकारी सेयर गर्नुहोला
Previous उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाइ, उल्लङ्घन गरे कैद सजायसम्म
Next जेठ १८ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खुल्ला गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय